Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny COVID-19 any India dia nihoatra ny 21 tapitrisa tamin'ny tranga vaovao 412,262 XNUMX androany
Ny isa COVID-19 dia mitombo isa hatrany any India isan'andro, satria ny governemanta federaly dia namoaka ny fanidiana hidiny mba hifehezana ny toe-javatra miharatsy.
Raharaha COVID-412,262 vaovao 19 no voasoratra anarana manerana ny firenena tato anatin'ny 24 ora
India dia manoratra tranga 400,000 amin'ny andro iray fanindroany amin'ity volana ity
Karazana vaksinina roa - Covishield sy Covaxin - no omena ny olona any India
Nanambara ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fiahiana ara-pianakaviana any India fa nihoatra ny 21 tapitrisa ny isan'ireo voan'ny virus coronavirus tao androany satria tranga COVID-412,262 miisa 19 24 no voasoratra manerana ny firenena tato anatin'ny XNUMX ora lasa izay.
Fanindroany tamin'ity volana ity fa 400,000 XNUMX ny tranga voasoratra ao anatin'ny iray andro.
Nahatratra 3,980 ny maty - ny isan'isa betsaka indrindra hatreto - no voarakitra ao amin'ny firenena nanomboka ny alarobia maraina, izay nahatratra 230,168 ny isan'ny maty, hoy ny minisiteran'ny fahasalamana.
Ny isa COVID-19 dia mitombo isa hatrany any India isan'andro, satria ny governemanta federaly dia namoaka fanidiana hidin-trano tanteraka hifehezana ny toe-javatra miharatsy. Na dia misy aza ny fanjakana sasany dia nametraka tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina na fanidiana hidin-trano.
Ny renivohitr'i India, Delhi dia napetraka tamin'ny fanidiana fahatelo nifandimby hatramin'ny 10 Mey. Na dia nofoanana aza ny fanadinana an-tsekoly sasany, ny sasany kosa nahemotra taorian'ny raharaha COVID-19.
Delhi, izay iray amin'ireo toerana voan'ny COVID-19 betsaka indrindra teto amin'ny firenena, dia nanatri-maso tranga vaovao 20,960 ary 311 no maty hatramin'ny Alarobia.
Manodidina ny 18,063 ny olona maty tany an-drenivohitra nasionaly noho ny COVID-19, nanamafy ny sampana fahasalamana ao amin'ny faritanin'i Delhi.
Ny isan'ny tranga miasa isan'andro dia nitombo tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Tamin'ny volana Janoary, ny isan'ireo tranga isan'andro eto amin'ny firenena dia nidina ambany noho ny 10,000.
Ny governemanta indiana dia nameno ny toeram-pitsapana COVID-19 manerana ny firenena, satria efa mihoatra ny 296 tapitrisa ny fitiliana natao hatreto.
Nahatratra 296,775,209 ny fitiliana natao hatramin'ny alarobia, ka 1,923,131 ny fitiliana natao ny alarobia fotsiny, hoy ny angona farany navoakan'ny filankevitra Indiana momba ny fikarohana ara-pitsaboana (ICMR) ny alakamisy.
Karazana vaksinina roa - Covishield sy Covaxin - no omena ny olona any India.
India koa dia nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksininy Sputnik V vita Rosiana tamin'ny sabotsy.